Apple waxay ogtahay sida lacag loo sameeyo | TeraNews.net
Apple waxay sameyn kartaa lacag
qoraaga artem La daabacay 05.02.2018
Falanqeeyayaasha Apple waxay soo sheegeen iibka taleefanka casriga ee rubuc qarnigii la soo dhaafay, iyagoo siinaya maaraynta laba war - wanaag iyo xumaan. Qalabka mobilada ee ka socda qorshaha lagu dhawaaqay ee unugyada milyan ee 100, waxay suurtogal u ahayd in lagu xaqiijiyo kaliya unugyo ah 77,3 milyan - 77% tirada la qorsheeyay. Si kastaba ha noqotee, marka la eego lacagta, sababtuna tahay qiimaha sicir bararka ee calanka iPhone X, sumadda Mareykanka ayaa ku guuleysatay inay hesho dakhli rikoor ah oo ah bilyanka 88,3 bilyan doolar.
Sida saxda ah sanad ka hor, markay ahayd warbixintii rubuc-xilli isla muddadaas, xisaabiyeyaashu waxay soo sheegeen macaash ka bilyan 78,4 bilyan doolar, oo ah $ 10 bilyan kayar tii sanadkii 2017. Marka loo eego 70% iibku waa iibyo shisheeye.
Laakiin waqti hore ayey u tahay Apple inay furto shaambad, maxaa yeelay muddo sannad ah, macaamiisha kama wareejin magacyada qiimaha jaban uguna wareegeen aalado qaali ah. Falanqeeyayaasha ayaa sheeganaya in faa iidada shirkadda ay siisay taleefanka casriga ah ee iPhone X oo qiimahoodu yahay 999 dollars. Marka la eego tirada aaladaha la iibiyay, dhaqdhaqaaqa ayaa hoos u dhacaya. Kombuyuutarrada MAC iyo taleefannada gacanta ayaa hoos u dhacay, sida ay caddeeyeen tirooyinka.
Marka loo eego qaybta "alaabada kale", oo ay ku jiraan qalabka dhegaha la gashado, saacadaha, Apple TV iyo bey'adaha kale, halkan, liddi ku ah, waxaad arki kartaa koror ku yimid iibka 36% (5,5 billion dollars). Ayadoo la adeegsanayo codsiyada Apple, astaanta ayaa sidoo kale ku guuleysatay inay kasbato 18% in ka badan xilliyadii hore (bilyannada 8,5 dollars).
Blogger wuxuu dhigay 3 1 Light Light: dulmar guud
Messenger Signal - waa maxay, muuqaalada
Xiaomi Mi 11 Ultra - IP68 ilaalinta be
Xiaomi ayaa sare ugu kacday kaalinta 3aad ee iibinta taleefannada casriga ah
Bomper ku yaal Xiaomi Mi 10T Lite 5G - oo lagu raadinayo pragmatism
Muxuu noqon doonaa iPhone 13 - run iyo khiyaali
Hummer EV SUV - Nooca SUV-ga korantada ah ayaa daaha laga rogay
Huawei H6 WS8000 / 6 - Shiinaha ayaa qaatay kor u qaadista Mesh
Xusuus-qorka VAIO SX12 wuxuu sheeganayaa inuu la tartamo MacBook-ga
Hal Netbook OneGx1 Pro - Laptop-ka Ciyaaraha Pocket-ka
Xiaomi qashin qallajiye
ATV: waa maxay, dulmar guud, taas oo ku habboon in la iibsado